ने.क.पा.का गण्डक ब्युरो सदस्यहरु धमाधम गिरफ्तार, गोर्खा सेक्रेटरी बिकास पनि समातिए – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ फाल्गुन २, शुक्रबार) २३:३५
बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तनहुँ जिल्ला इन्चार्ज पूर्णजित पुन ‘उभार’ गिरफ्तार भएको तीन दिनपछि सोही पार्टीको गोर्खा जिल्ला सेक्रेटरी बिकास ओली गिरफ्तार भएका छन्। उनी पार्टीको गण्डक ब्युरो सदस्य समेत हुन्।
उनलाई शुक्रबार दिउँसो ४ बजेतिर मुग्लिनबाट प्रहरीले गिरफतार गरेको हो। उनीसंगै अर्का एक पार्टीका जिल्ला सदस्य पनि गिरफ्तारीमा परेका छन्। उनको पहिचान खुलेको छैन।
ने.क.पा. गोर्खाका तात्कालिन जिल्ला इन्चार्ज योगेन्द्र कुमाल र जिल्ला सेक्रेटरी कपिल भट्ट गिरफ्तार भएपछी करीब ६ महिना अघि ओली जिल्ला सेक्रेटरी भएर गोर्खा आएका थिए। सर्बोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका नेताद्वय कुमाल र भट्टमध्ये भट्ट फेरी करीब एक हप्ता अघि चितवनको भरतपुरबाट गिरफ्तार भएका छन्।
पार्टी कामको सिलसिलामा हिडिरहेकाे बेला गाेरखा जिल्ला सेक्रेटरी विकाससमेत दुई जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको बताइए पनि उनीहरुलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन। उनीहरुको गिरफ्तारीका बारेमा प्रहरीले आधिकारिक रुपमा केही जानकारी दिएको छैन।
ने.क.पा. गण्डक ब्युरो सदस्य कपिल भट्ट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौ टेकुमा बिस्फोटन सम्बन्धि मुद्दा खेपिरहेका छन्। अर्का ब्युरो सदस्य समेत रहेका तनहुँ जिल्ला इन्चार्ज उभारलाई प्रहरीले बिस्फोटन सम्बन्धि मुद्दा चलाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा राखेको छ। अर्का ब्युरो सदस्य एबम तात्कालिन कास्की जिल्ला सेक्रेटरी सुजन बिक पनि लामो समय कास्की कारागारमा जेल जीवन बिताई रिहा भए लगत्तै फेरी गिरफ्तार भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुकै हिरासतमा छन्।
पोखरा कार्य क्षेत्र रहेका युवा संगठनका नेता खिम बहादुर कार्की ‘बुलेट’ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको हिरासतमा छन्। आफ्नो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएर काठमाण्डौमा स्वास्थ्योपचार गरिरहेका र पार्टी परित्याग गरेको सार्वजनिक घोषणा गरेका ने.क.पा. कास्कीका सदस्य बिजय अधिकारी काठमान्डौबाटै गिरफ्तार भएर करीब दुई हप्तादेखि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाण्डौको हिरासतमा थुनुवा जीवन बिताइरहेका छन्।
यसै गरी जनयुद्ध दिवसको पुर्बसंध्यामा मशाल जुलुश प्रदर्शन गरिरहेका बखत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १३ कुँडहरबाट चार जना सामान्य बिद्यार्थी गिरफ्तारीमा परेका छन्। मशाल जुलुश गर्दै गर्दा गिरफ्तार भएका बिद्यार्थीहरुमा दिपक परियार , प्रमोद सिह , सागर बिक , उपेन्द्र परियार रहेका छन्। उनीहरुलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखिएको छ र सार्वजनिक अपराध अन्तरगतको अभद्र ब्यबहार मुद्दा लगाईएको छ।
(२०७६ फाल्गुन २, शुक्रबार) २३:३५ मा प्रकाशित